Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple way niyad jabi kartaa sababtoo ah iibka ka hooseeya Shiinaha | Wararka IPhone
Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple way niyad jabi kartaa sababtoo ah iibka ka hooseeya Shiinaha
Markii ay weli u harsan tahay dhowr toddobaad wiilasha Cupertino inay si rasmi ah ugu dhawaaqaan natiijooyinka dhaqaale ee u dhiganta rubuca saddexaad ee sanadka, rubucii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee shirkadda ee sannadka 2018, falanqeeyayaashu waxay bilaabeen inay daabacaan warbixino kala duwan oo ku saabsan sida kuwani noqon karaan. Waqtigaan la joogo, sida laga soo xigtay Goldman Sachs, oo tan ogaa in muddo ah, ayaa sheegaysa taas ma fiicnaan doonaan.
Sida laga soo xigtay Goldman Sachs the hoos u dhac ku yimid iibka taleefannada iPhone-ka ee Shiinaha waxay noqon doontaa sababta ugu weyn ee natiijooyinka dhaqaale ee la filayo rubuca saddexaad ee sanadka 2018 ay yihiin niyad jab. Sida uu sheegayo falanqeeyaha Rod Hall, Apple waxaa la soo daristay hoos u dhac weyn oo ku yimid dalabkii ay u qabeen wax soo saarkooda, gaar ahaan iphone-ka dalka gudihiisa oo noqday isha ugu weyn ee dakhli ka soo galo shirkada sanadihii ugu dambeeyay.
Sida laga soo xigtay Hall, "Waxaa jira calaamado badan oo muujinaya gaabis deg deg ah oo ku saabsan baahida macaamiisha ee Shiinaha oo aan aaminsanahay inay si fudud u saameyn karto dalabka Apple ee waddanka deyrtan." Hall ayaa sidoo kale qirtay in suuqa casriga ee Shiinaha uu muujiyay calaamado horumar ah inta lagu gudajiray rubuca labaad, laakiin saadaashiisa rubuca saddexaad waxay tilmaamaysaa hoos u dhac 15% ah.
Falanqeeyahaani wuxuu rajeynayaa in moodooyinka cusub ee Apple soo bandhigtay bishii Sebtember ee la soo dhaafay ay caawin doonaan ka hortageysa hoos u dhaca guud ee dalabka taleefannada casriga ah ee dalka ka jira, maadaama ay qaali ku noqon karto bayaanka dakhliga shirkadda. Hoolka shirkaduhu waxay soo jeedinayaan in khad cusub oo ka mid ah wax soo saarka Apple ee dalka ka jira ay gacan ka geysaneyso iibinta iPhone-ka isla markaana ay awood u yeelan karto inay qayb ahaan hoos u dhigto hoos u dhaca guud ee suuqa, laakiin qayb ahaan uun.
Inta badan koritaanka suurtagalka ah ee Apple ay soo martay sannadihii ugu dambeeyay Shiinaha, waxaa u sabab ahaa dalbashada shaashadaha waaweyn. Nofeembar 1, waxaan ka takhalusi doonaa shakiga waxaanna hubin doonnaa haddii saadaasha falanqeeyahan ugu dambeyntii la fuliyay ama haddii ay lid ku tahay, iPhone-ka cusub, gaar ahaan iPhone XS Max, ayaa suurtageliyay in laga hortago hoos u dhaca iibka ee Aasiya. suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone Xs » Natiijooyinka maaliyadeed ee Apple way niyad jabi kartaa sababtoo ah iibka ka hooseeya Shiinaha
Barnaamijka Nike + Run Club ayaa hadda la jaan qaadaya Apple Watch Series 4